Qarixii waddada Afgooye: “Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Qarixii waddada Afgooye: “Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay...
Ismahaan Imaan Maxamed ayaa noo sheegtay inxanuun aad u badan ay dareemeyso, laakiin waxay ku baaqday in laga waantoobo dhibaateynta dadka rayidka ah.
“Waxaan Alle ka baryenaa inuu Soomaalida xal ukeeno. Waxyaabaha hadda dhaca ma aha si ay kusii socon karto. Xasuusteyda kama baxo qaraxaas, hurdadii way iga tagtay, sababtoo ah horay afka ayaan ka maqli jiray qaraxyada laakiin hadda waan la kulmay.”
Sida ay sheegtay Ismahaan, dadkii uu qaraxa dhibkaugu weyn kasoo gaaray waxay ahaayeen kuwii qeybaha hore ka saarnaa gaariga.
Previous articleTaabit Cabdi “Soomaaliya waxay taal meel aanu ka qaadi karin hoggaan ku yimid hab qabiil iyo laaluush”
Next articleUhuru decision on Majority Leader post was final, Duale tells Kanini Kega